အဓိကစာမျက်နှာ: သဘော — HunterThinks.com အဓိကစာမျက်နှာ: သဘော — HunterThinks.com
ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာကမလိုအပ်တဲ့နာကျင်မှုအပြည့်အဝသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်, လူသားမြားသညျသက်သေအထောက်အထား-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏နိုငျဖြစ်ကြောင်းသတိရ.
အခါတွင် Hunter ရှင်သန်ကူညီဖို့ရန်သင့်အားတောင်း
မင်္ဂလာပါ, ငါ့နာမကိုအခါတွင်ဖြစ်ပါသည်, ငါဂျာမန်ဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မမက္ကဆီကိုငါ့ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးဘော်ဒါဆောင်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ် Hunter တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး. ကျနော်တို့အတူတူမနက်စာစားခဲ့, အများကြီးစကားပြောနှင့်ရယ်. အဆိုပါမွန်းလွဲပိုင်းငါသည်ငါ့ခရီးကိုဆက်လက်. သို့သော်သာအချို့သောကီလိုမီတာ. ထိုအခါငါပြန်ဘော်ဒါဆောင်သို့ရောက်လာသည်. အဘယ်ကြောင့်? ငါခံစားချက်ခဲ့သောကြောင့်, . . .
Remember that humans domesticated dogs by selectively breeding the dogs that had desirable or human-like behavior. The selection for human-like behavior was sometimes unintentional, such as when our ancestors selected dogs with human-like yawns: dogs and humans are the only species that can catch yawns from the other species. (Caveat: recent research might have found . ..
If today’s copyright laws were in force in 1812, “The Star-Spangled Banner,” the United States national anthem, would have been copyright infringement ofaBritish tune.
Copyright is supposed to encourage creativity, not stifle it. Modern copyright is abusive.
⇒ ဖတ်⇒⇐ အဟောင်းတွေ |